Zinedine Zidane Oo Iska Diiday Fursad Uu Kaga Bedeli Lahaa Mauricio Pochettino Kooxda PSG.
HomeWararka CiyaarahaZinedine Zidane oo iska diiday fursad uu kaga bedeli lahaa Mauricio Pochettino kooxda PSG.
February 2, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Zinedine Zidane ayaa lagu soo waramayaa inuu diiday fursad uu kula wareegi lahaa shaqada Mauricio Pochettino ee Paris Saint-Germain bishii hore.
Les Parisiens ayaa 11 dhibcood oo nadiif ah ku haysa hogaanka horyaalka Ligue 1 ee Pochettino, inkasta oo difaacooda Coupe de France kadib markii laga reebay.
Iyadoo xiriir joogta ah lala leeyahay shaqada Manchester United, Pochettino ayaa la saadaaliyay inuu ka tagayo PSG 2022, kooxduna waxay dooneysay inay dirto Janaayo iyadoo jahawareerka taageerayaashu ay sii kordhayaan.
Sida laga soo xigtay TF1 , iyada oo loo marayo GFFN , Zidane ayaa loo aqoonsaday inuu yahay musharraxa ugu horreeya ee beddelaya Pochettino, laakiin maamulihii hore ee Real Madrid ayaa iska diiday fursad uu ugu laabto godka Paris.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Zidane uusan ku qanacsaneyn qaabka loo maamulo PSG, sidoo kale qaab ciyaareedkooda sidoo kale ma uusan dooneynin inuu ka hortago Real Madrid tartanka Champions League dhamaadka bishaan.
PSG ayaa weli loo maleynayaa inay qorsheyneyso nolosha ka dib Pochettino, inkastoo, warbixin ka duwan ayaa sheegaysa in xiddiga reer Argentine laga yaabo in boxo shaqadiisa bisha Maarso.